XASAASI: Dowlada Soomaaliya oo Lacag Malaayiin Dollar ah ka heshay Sacuudiga & RW Kheyre oo ka hadlay Tirada Lacagta + Sababta ay u qaateen oo ah in ay… | Garoowe.net	 #ref-menu
XASAASI: Dowlada Soomaaliya oo Lacag Malaayiin Dollar ah ka heshay Sacuudiga & RW Kheyre oo ka hadlay Tirada Lacagta + Sababta ay u qaateen oo ah in ay…
Oct 3, 2017 - Aragtiyood
Waxaa Akhristay 247
Dowladda Somaliya, ayaa waxay shaaca ka qaaday in 50 milyan oo dollar oo kaalmo ah, ay ka heshay Boqorooyada Sacuudi Carabiya.
Ra’iisul Wasaaraha Somaliya, Xasan Cali Khayre ayaa Boqortooyada Sucuudiga uga mahadceliyey taageerada joogtada ah ee dib u dhiska dalka, gaar ahaan deeqda 50ka milyan ee dollar oo ay soo gaarsiisay Dowladda Federaalka Soomaaliya.
Ra’iisul Wasaare Khayre ayaa yiri “Waxaan si kal iyo laab ah uga mahadcelineynaa Boqortooyada Sacuudiga oo waqtigan baahida loo qabo noogu deeqday 50 milyan oo dollar, si loogu adeego shacabka Soomaaliyeed, taasoo muujineysa sida dalka aan wallaalaha nahay ee boqortooyada Sacuudiga ay u daneynayso ka qeybqaadashada dib u dhiska dalkeena.”
Booqashadii Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliya, Maxamed Cabdullaahi Maxamed (Farmaajo) uu dhowaan ku tagey Boqortooyada Sacuudiga ayaa aheyd mid lagu sii xoojinayay xiriirka taariikhiga ah ee labada dal.
Ra’iisul Wasaare Khayre oo hadalkiisa sii wata ayaa hoosta ka xariiqay sida ay Dowladda Federaalka uga go’antahay in deeqdaas loogu isticmaalo kordhinta adeega shacabka Soomaaliyeed. deeqdaan 50ka milyan ah ayaa lagu shubayaa Khasnada Dawladda ay ku leedahay Bankiga Dhexe, waxaana loo isticmaali doonaa si ku dhisan daahfurnaan iyo isla xisaabtan. Dowladda Federaalku waxay la wadaagi doontaa warbixin hufan oo la xariirta qaabka kharashka loo bixiyey.